कुन महिलाको स्वभाव कस्तो ? नामबाटै यसरी थाहा पाउनुस् ! – ताजा समाचार
जन्मिएको स्थान, समय र नामअनुसार पनि मानिसको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउन सकिन्छ ।
यी मध्ये यहाँ हामीले नामको बारेमा चर्चा गरेका छौँ ।
धर्मशास्त्र भन्छ – कुनैपनि व्यक्तिको जीवनमा नामको ठूलो महत्व छ । यता ज्योतिष विज्ञानले पनि नामबाटै बानी व्यहोराको बारे जानकारी हासिल गर्न मद्दत गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
जुन महिलाको नाम अंग्रेजी अक्षर डब्लूबाट सुरू हुन्छ ती महिला निकै खर्चालु मात्र होइन उनीहरू निकै शौखिन पनि हुन्छन् ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : यो अक्षरबाट नाम सुरू भएकी महिला हुन्छन् बढी खर्चालु
शास्त्रमा लेखिएअनुसार, डब्लूबाट नाम सुरू हुने महिलाहरू प्रति पुरूषहरू सहजै आ.क.र्षित हुन्छन् । उनीहरू सँधै जसो पुरूषहरू माझ चर्चित भइ नै रहन्छन् । त्यस्ता महिलाहरु सँधै अरूको भि.त्री कु.रा जान्न उ.त्सु.क रहन्छन् ।
यतिमात्र होइन डब्लू अक्षरबाट नाम सुरू हुने महिलाहरू अ ना व श्य क रूपमा अरूसँग स.म्ब.न्ध राख्न चाहँदैनन् ।
सकेसम्म उनीहरू विवादबाट बच्छन् । त्यस्ता महिला तथा युवतीहरुले साथी बनाउँदा पहिले त्यो व्यक्तिको हैसियत र क्षमताबारे विचार गर्छन् । अनिमात्र अघि बढ्छन् । त्यस्ता महिलाको स्वभाव निकै जिद्दी हुन्छ ।
यो समाचार तपाइलाई मन पर्‍यो भने फेसबुकमा शेयर गरेर अरु साथीहरुलाई पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ।
नोट : यो पोष्टमा फिचरको रुपमा प्रयोग गरिएको तस्विर जिम ट्रेनर रिची शाहको हो । भारतीय नागरिक रिचि शाह पेशाले जिम ट्रेनर हुन् तर उनको सुन्दरता कुनै बलिउड अभिनेत्रीहरुको भन्दा कम छैन । उनको बारेमा ताजा समाचारमा एक स्टोरी प्रकाशित भएको छ । हेर्नुहोस उक्त स्टोरी तलको लिङ्कबाट
यी हुन् जिम ट्रेनर सुन्दरी, जसको फिगरले बनाउँछ दुनियाँलाई फिदा (हेर्नुस् तस्विरहरु)